စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ရန် အနည်းဆုံးငွေပမာဏမှာ မြန်မာငွေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်၏ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် ဤပမာဏကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန် မြန်မာငွေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်ရှိသည့် လအတွက် ဘဏ် စာရင်း တစ်ခုချင်းစီသည် လစဉ် ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိပါမည်။ လတစ်လအတွင်း အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်သည် ယင်းငွေပမာဏအောက် လျော့နည်းနေက ယင်းလ၏ ဆုရွေးချယ်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပေ။
ဘဏ်စာရင်းစဖွင့်သည့် ပထမဦးဆုံးလတွင် ၁၆ရက်နေ့မတိုင်မီ account ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက ဘဏ်စာရင်း၏ အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်ကို စဖွင့်သည့်ရက်မှ ယင်းလ၏ နောက်ဆုံးရက်အထိ စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သည်။။
နောက်ပိုင်း လများတွင် ဘဏ်စာရင်း၏ အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်ကို ၁ရက်နေ့မှစ၍ နောက်ဆုံးရက်အထိ စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သည်။ ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်၌ ပါဝင်နိုင်ရန် ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ နေ့စဉ်အနည်းဆုံးစာရင်းလက်ကျန် မြန်မာငွေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထားရှိရမည် ဖြစ်သည်။
လတစ်လအတွင်း အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်သည် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၀၀,၀၀၀ အောက်လျော့ နည်းနေသော်လည်း အတိုးနှုန်း ၃% ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကနဦးဆုရွေးချယ်ပေးအပ်မည့် စုစုပေါင်း ငွေပမာဏသည့် ကျပ် သိန်း ၃၀၀ ဖြစ်ပြီး JZu account ၏ အပ်ငွေ တိုးတက်များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်မည့် စုစုပေါင်း ငွေပမာဏအား ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးအပ်သွားပါမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လတစ်လ၏ ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်တွင် နောက်ဆုံး ဆုရရှိမည့်သူသည် ၎င်း၏ ဆုငွေပမာဏကို အပြည့်အ၀ ရရှိပါမည်။ လစဉ် ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်မည့် စုစုပေါင်း ပမာဏသည် လစဉ် ပျှမ်းမျှ JZu Account သို့အပ်နှံငွေစုစုပေါင်း၏ ၂.၅ % အထိ တွက်ချက်ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လတစ်လ၏ပထမဆုံး တနင်္လာနေ့တွင် JZu ဘဏ်စာရင်းထဲမှ ယခင်လ၏ အနည်းဆုံးစာရင်းလက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါမည်။ မြန်မာငွေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက် ရှိသော ဘဏ်စာရင်းသည် JZu ၏ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်အတွင်းသို့ ပါဝင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
လတိုင်း၏ ဆုရွေးချယ်မည့်နေ့ရက်များကို Facebook စာမျက်နှာများနှင့် www.yomabank.com/jzu တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဆုရရှိသူတစ်ဦးအတွက် အမြင့်ဆုံးပေးအပ်မည့် ဆုငွေသည် မြန်မာငွေ သိန်း ၂၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။
ဆုရရှိသူများကို SMS နှင့် email များမှတဆင့်ဆုရရှိကြောင်း ရေးသားအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
လစဉ် ဆုရရှိသူ ရွေးချယ်မှုကို ရိုးမဘဏ်မှပြုလုပ်သော ပွဲ၌ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
J-Zuu Account ဖွင့်ခြင်းသည် ရိုးမဘဏ်က customer ၏ အရှေ့ဆုံးနာမည်တစ်လုံး၊ ဆုရရှိသည့် ပမာဏ နှင့် အကောင့်နံပါတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တို့ကို လစဉ် ဆုရွေးချယ်ပွဲ အခမ်းအနား၊ အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အခြားသောမည်သည့် channel အစီအစဉ်နှင့် ဖြစ်စေ ဖော်ပြ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း customer ထံမှ သဘောတူညီချက်ရရှိပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။
ဆုရွေးချယ်ပြီးနောက် ၁၀ရက်အတွင်း ဆုရရှိသူများကို ရိုးမဘဏ်က အကောင်းဆုံးကြိုးစားကာ ဆုများပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
1. By using Cash-in services at Wave, customer agrees to pay the applicable fees, which will be deducted from the amount of the deposit.
Cash In ဝန်ဆောင်မှုကို Wave ဆိုင်တွင် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်ခများကို ထည့်သွင်းသည့် ငွေပမဏမှ နုတ်ယူ ကျခံရမည်ကို သဘောတူပါသည်။
2.Customer is allowed to makeanumber of free cash-in for each calendar month. For any additional cash-in transaction, applicable fees will be charged and deducted from the customer’s SMART account.
အသုံးပြုသူသည် လစဉ် သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အခမဲ့ Cash In ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါမည်။ ၎င်း သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်သော Cash In ထည့်သွင်းခြင်းများအတွက် ဝန်ဆောင်ခကို အသုံးပြုသူ၏ SMART အကောင့်မှ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. Customer is required to provide their National Identification Card (NRC) to the Wave Agent for verification and validation.
အသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်အား Cash In ဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်သည့် Wave Agent ထံသို့ ယူဆောင်ကာ စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
4.Customer is required to provide detailed information such as name, SMART Account number, contact number, Yoma transaction number, Wave transaction number, date and time of the transaction in the case of disputes . Yoma Bank and Wave Money have to validate the information provided by the clients.
အသုံးပြုသူသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပေါ်လာပါက ရိုးမဘဏ်နှင့် Wave Money မှ စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အသုံးပြုသူအမည်၊ SMART Account နံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၊ Yoma Transaction နံပါတ်၊ Wave Transaction နံပါတ်၊ Cash in ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် စသည့် အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရပါမည်။
5.In case of disputes or issues arising out of or in connection with the cash-in services, customer is required to allow Yoma Bank and Wave Money to resolve the dispute or issue within the turn-around-time as determined by both Yoma Bank and Wave Money from time to time.
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ရိုးမဘဏ်နှင့် Wave Money မှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်း စောင့်ဆိုင်းရန် လိုအပ်သည်။
6.Yoma Bank has the right to amend these Terms and Conditions at its sole discretion.
ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
1. By using Cash-out services at Wave, customer agrees to pay the applicable fees, which will be deducted from the amount of the withdrawal.
၁။ Cash Out ဝန်ဆောင်မှုကို Wave ဆိုင်တွင် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်ခများကို ထုတ်ယူမည့်ငွေပမဏမှ ကျခံရမည်ကို သဘောတူပါသည်။
2. Customer is allowed to makeacertain number free cash-out for each calendar month. For any additional cash-out, applicable fees will be charged and deducted from the customer’s SMART account for each cash-out.
၂။ အသုံးပြုသူသည် လစဉ် သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အခမဲ့ Cash Out ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါမည်။ ၎င်း သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်သော Cash Out ထုတ်ယူခြင်းများအတွက်ကိုမူ အသုံးပြုသူ၏ SMART အကောင့်ထံမှ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားအား Cash Out ဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်သည့် Wave Agent ထံသို့ယူဆောင်ကာ စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
4. Customer is required to provide detailed information such as name, SMART Account number, contact number, Yoma transaction number, Wave transaction number, date and time of the transaction in the case of disputes. Yoma Bank and Wave Money have to validate the information provided by the clients.
၄။ အသုံးပြုသူသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပေါ်လာပါက ရိုးမဘဏ်နှင့် Wave Money မှ စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အသုံးပြုသူအမည်၊ SMART Account နံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၊ Yoma Transaction နံပါတ်၊ Wave Transaction နံပါတ်၊ Cash Out ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် စသည့် အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရပါမည်။
5. In the case of disputes or issues arising out of or in connection with the cash-out services, customer is required to allow Yoma Bank and Wave Money to resolve the dispute or issues within the turn-around-time as determined by both Yoma Bank and Wave Money.
၅။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ရိုးမဘဏ်နှင့် Wave Money မှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာ အတွင်း စောင့်ဆိုင်းရန် လိုအပ်သည်။
6. Customer is required to cash out the amount of money of each specific transaction within (21) days after such amount of money has been transferred.
၆။ အသုံးပြုသူသည် Cash Out Transaction ပြုလုပ်ပြီးပါက ရက်ပေါင်း (၂၁) အတွင်း Wave ဆိုင်မှ ငွေထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
7. If the amount of money ofaspecific transaction is not being cashed-out within (21) days form its transfer, the transaction will be expired and customer will receive the reversal into SMART account within 10 business days after the transaction expiry.
၇။ အသုံးပြုသူသည် Cash Out Transaction ကို ရက်ပေါင်း (၂၁) အတွင်း ငွေမထုတ်မိပါက ထိုငွေကြေးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်သည့်နေ့မှ (၁၀) ရက် အတွင်း SMART Account ထဲသို့ ငွေပြန်လည်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
8. Yoma Bank has the right to amend these Terms and Conditions at its sole discretion.
၈။ ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
9. Yoma Bank shall not be liable for any failure or delay incurred by any customer regarding cash-in or cash-out transactions, including but not limited to, any failure or delay due to wrongful information provided by the customers regarding account numbers and amounts to be transferred.
၉။ အသုံးပြုသူမှ မှားယွင်းပေးပို့လာသည် အချက်အလက်များ (ဥပမာ − အကောင့်နံပါတ် မှားယွင်းမှု၊ ငွေပမာဏ မှားယွင်းသတ်မှတ်မှု)ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ မူ၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိစ္စများအတွက် ရိုးမဘဏ်သည် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။